Dagaalka Twitter-ka: "Soomaaliya yaa wax u sheega" - BBC News Somali
Waxaa baraha bulshada ka bilaawday hadal heyn ku saabsan muranka badda Kenya iyo Soomaaliya, muranka waxaa ka hadlay dad badan oo isticmaala barta Twitter-ka oo kasoo kala jeedo labada dal, waxaana la sameeyay halkudhigyo ah "Kenya yaa wax u sheega" iyo "Soomaaliya yaa wax u sheega". (#SomeoneTellSomalia iyo #SomeoneTellKenya"
Dadkan ayaa kala difaacaya labada dal, qof kasta waxaa u fikraddiisa raacinayay halkudhigga lagu taageerayo dalkiisa.
Qof magaciisa ku sheegay Cabdisalaan Caato ayaa ka dhawaajiyay in dhulka lagu muransan yahay ay leedahay Soomaaliya halka Cali Baashi Maxamed uu yiri 'waa in Kenya ay ogaataa in haatan Soomaaliya aysan joogin xilliggii ay socdeen dagaallada sokeeye.
Xuquuqda Sawirka @AbdisalamAato @AbdisalamAato
Xuquuqda Sawirka @Alibash_Mohamed @Alibash_Mohamed
Khilaafka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku shareeray wuxuuna salka ku hayaa arrimo ku saabsan muranka lahaanshaha meelo ka mid ah xadka dhinaca badda ee u dhaxeeya labada waddan.
Axmed Maxamed oo isagana kamid ah dadka sida weyn uga dhex muuqda baraha bulshada wuxuu sheegay in Soomaalida ay kaalin weyn ka qaateen sare u qaadidda dhaqaalaha Kenya isla markaasna Balaayiin shilin ay sannad kasta ku biiriyaan dhaaqalaha Kenya.
Xuquuqda Sawirka @Asmali77 @Asmali77
Dhanka kale, qaar kamid ah dhalinyarada Kenya ayaa qaba in dalkooda uu cadaadis ku heyo Soomaaliya, muranka badda aawaadeed, balse ay iska indha tirtay arrinta ku saleysan jasiiradda kale ee uu muranka kala Uganda iyo kenya ay isku haystaan lahaansheheeda, halka qaar kalena ay qabaan in hal taako aysan u ogoleyn in Soomaaliya ay qaadato.
Xuquuqda Sawirka @xtiandela @xtiandela
Xuquuqda Sawirka @OmunduStrong1 @OmunduStrong1
Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya waxaa si weyn u hadal hayay warbaahinta gobolka, iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa warar hor leh ay kasoo kordhayaan.
Dad qaar waxay soo jeediyeen in laga shaqeeyo midnimada iyo nabadda si looga shaqeeyo danaha dalka.
Xuquuqda Sawirka @Mohamedelmi101 @Mohamedelmi101
Dacwadaasi ayaa haatan hortaalla maxkamadda ICJ, waxaana garsoorayaasha ay oggolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, inkastoo Kenya ay marwalba dooneysay in arrintan lagu dhameeyo qaab is-fahan ah.
Faallo: Soomaaliya lama taaban karo inta ay ka soo miyirsaneyso
Wargeyska The Star ayaa qoray faallo ku saabsan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya iyo damaca kasta oo ay ka leedahay shidaalka laga helay deegaannada dhaca aagga uu khilaafka ka taagan yahay ee dhanka badda.
Dhawaan baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen sharciga shidaalka si ay sahan uga sameyso dhulka badda oo ay ku muransan yihiin Kenya iyo Soomaaliya, waxay arrintani Kenya ku abuurtay walaac ah in Soomaaliya ay gasho heshiis dhanka shidaalka ah oo ay uga golleedahay in aanan wax faragelin ah lagu sameyn dhulka lagu muransan yahay.
Maqaalka ayaa lagu sheegay in Kenya aysan weli xaqiijin qorshaheeda ku aadan ka faa'ideysiga shidaalka aggaasi balse, ma waxay noqon doontaa sida dal aanan waxbo isku ogoleyn dalalka kalena aan waxba u ogoleyn?
Kenya waxay deris dhaw yihiin Soomaaliya, waxay magangelyo u fidisay malaayin qaxooti soomaali ah. Kenya waxay ka fikiri laheyd sidii ay u bilaabi laheyd ka faa'ideysiga shidaalka laga helay aagga lagu muransan yahay si ay ugu daryeesho qaxootiga soomaaliya. "Arrintaas cid cabasho ka keeni karto ama ka hor istaagi karto Kenya inay ku tallaabsato ma jirto", ayaa lagu yiri faallada lagu qoray wargeyska.
Nasiib darro, Kenya waxay iska indha tirtay arrintani iyadoo nabadda iyo dhaqaalaha Kenya aanan lala barbardhigi karin dalka deriska ah ee colaadaha ay ragaadiyeen. Ilaa hadda, Soomaaliya oo kasoo kabaneysa dhibaatada dagaallada waxay bilawday inay ka faa'ideysato shidaalka laga helay deegaanno dhaca xadka labada dal oo Kenya hadda ay ku baraarugtay.
"Soomaaliya waa sida Feeryahan la lagdday oo isku dayaya inuu dhulka kasoo kaco. Sharciga ciyaartan uma ogolaanayo qofka la lagday in lasii weeraro tan iyo inta uu dib ugu soo kacayo."
Maqaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ceeb tahay in Kenya xilliggan ay si caro leh uga jawaabto muranka badda ee kala dhexeeyo Soomaaliya. Kenya waa inay shidaal qodis ka sameyso dhinaca deegaanada xadka labaada oo aanan muran ka dhalan karin oo ay raali ka noqon karto Soomaaliya.
"Ugu dambeyn, Kenya iyo Soomaaliya waa inay ka shaqeeyaan xoojinta derisnimada kuwaas oo sannado badan isku tiirsanaa."